Dufcadii labaad ee Somaliland ka Qalin Jabiya Pre Operative Nurse
Thursday, 21 May 2015 00:00	Latest
Munaasibad balaadhan oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ardaydan qalin jabinaysay oo lagu qabtay Maan Soor Hotel ee magaalada Hargeisa ayay ka soo qayb galeen masuuliyiinta wasaarada Caafimaadka Somaliland, Hogaanka sare ee SLNMA, Hayada PHARO FOUNDATION, Macalimiintii wax baraysay ardayda, waalidiin iyo marti sharaf kale.
Ardaydan oo isugu jiray 11 bartay waxa loo yaqaan preoperative care iyo 10 bartay tobabarka tobabarayaasha ama TOT ,Agaasimaha fulinta ee SLNMA Fouzia Mohamed Ismail oo ugu horaynba ka hadashay xaflada ayaa faahfaahin ka bixisay sida uu ku bilaabmay tobabarka ardaydan iyo muhiimada ay bulshada u leeyihiin, iyadoo tilmaantay in ay door laxaad leh ka ciyaari doonaan qaybaha qaliinada iyo waliba tobabarka xoog cusub oo u soo bixi doona dalka. Waxa kale oo ay marwo fouzia u mahad naqday cid kasta oo gacan ka gaysatay oo ay ugu horayso hayada PHARO Foundation oo markii ururku ula tagay ka aqbashay hirgalintiisa .
Agaasimaha guud ee wasaarada caafimaadka Somaliland Dr Yusuf Axmed oo isaguna hadal ka jeediyay munaasibadan ayaa iftiimiyay baahida loo qabo qaybaha ay ardaydani barteen isagoo kula dardaarmay in ay muujiyaan daacadnimo iyo xil kasnimo xiliga ay bukaanka u adeegayaan.
Sidoo kale agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaarada caafimaadka Somaliland Xuseen Axmed Xaashi ayaa khubad uu ka jeediyay madasha kaga hadlay shaqaalaynta ardayda soo baxay isagoo xusay in aanay waxba ka hagran doonin isla markaana ay shaqaalayn doonaan intii karaankooda ah, isagoo si gaar ah carabka ugu dhuftay xubnaha ka imi gobolada ka baxsan gobolka maroodi jeex ama caasimada.
Waxa kale oo iyaguna munaasibadan ka hadlay Jonah Kiruja oo ahaa macalinkii wax soo barayay ardaydan ,agaasimaha machadka tobabarka culuumta caafimaadka ee Hargeisa Axmed Maxamed Diiriye, iyo xubno ku hadlayay afka ardayda qalin jabinaysay , Gebagebadiina agaasimaha guud ee wasaarada Caafimaadka Dr Yusuf Axmed ayaa shahaadooyin gudoonsiiyay 21 kan arday.
Last Updated on Sunday, 24 May 2015 07:25